SomaliTalk.com » 2012 » September » 16
Home » Archive Maalinta September 16th, 2012
Caleemo Saarka Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya oo ay ka qayb galeen Madaxweynah Jabuuti, Raiisul Wasaaraha Itoobiya , iyo Raiisul Wasaare kuxigeeka Turkiga iyo Madax kale
Waxaa Goor dhow Dugsiga Sare ee Booliska kusoo gabagaboodey Munaasabadda Caleemo saarka Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Prof Xasan Shiikh Maxamuud waxaa ka qayb galey Xafladaas Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle , Raiisul Wasaaraha ku meel gaarka ee Itoobiya Xayle Maryam, Rasiil wasaare ku xigeenka Turkiga Baker, Raiisul Wasaare ku xigeenk wadanka Uganda, xaghayaha Jaamcadda carabta Samiir...
Socdaalkeygii Kenya iyo 12 sano oo isbadal ah
Assalaamu alaykum. Waad salaamantihiin dhamaan walaalaha qeymaha badan ee ku xiran websitekan qaayaha badan. Maanta iyo maqaalkeena,wuxuu kusaabsanyahay safar 2 bilood ah oo aan ku tagay wadankaKenya12sano kadib. Kenyaiyo xaaladeeda,waxaad kala socotaan televisionada Soomaalida oo xarun kadhigtey xaafada Eastleigh ee magaaladaNairobilaakinse waxaan isku dayaya inaan kaa siiyo sawir kayara balaaran. QofkiiKenyabooqasha...
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo ku sii jeeda Magaalada New–York ee Cariga Mareykanka
Waxaa la filayaa in 23 bishaan September uu Dalka ka ambabaxo Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, waxaana uu tagi doonaa Magaalada New York ee Cariga Markeykanka halkaasuu kaga qayb geli doono Shirkii Sannadlaha ahaa ee Qaramada Midoobey oo ay ka qayb galaan Madaxda Dunida. Madaxweynaha ayaa waxaa la sheegey in safarkaan uu yahay safarkii ugu horeeyey ee uu dalka uga ambabaxo iyadoo...